Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Air India: Ugu dambeyntii Dhaqdhaqaaqa?
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Wararka Hindiya • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda
Arrimuhu waxay u muuqdaan inay ugu dambayntii ku sii jeedaan arrinta muhiimka ah ee cidda lahaan doonta oo maamuli doonta Air India, taas oo ay dawladdu baabi'in doonto.
Shirkadaha maalgashiga maaliyadeed ayaa ugu dambayn u soo ifbaxaya shirkadda duulimaadka ee Air India.
Waxay ahayd dhowr sano oo la isku dayay in la iibiyo markabkii qaranka, iyadoo la isku dayay in la xannibo sababo kala duwan awgood.
Weli waxaa ku jira khasaarihii weynaa ee diyaaradda - sida yaa wax ka qaban doona - iibsadaha cusub ama dawladda?
Tata Sons, oo aasaasay Diyaaradda Air India sannadkii 1932 -kii ka dibna ka baxay sannadkii 1953 -kii, ayaa mar kale u tartamaya shirkadda diyaaradaha, waxayna soo gudbisay dalabyo maaliyadeed oo ay la socdaan qaar kale oo ka mid ah kuwa wax soo iibsaday.
Guddoomiyaha SpiceJet, Ajay Singh, ayaa sidoo kale soo jeediyay dalab, iyo qaar ka mid ah maalgelinta maalgashiga ayaa sidoo kale Singh ku biiriyay hannaanka dalabka si loo sugo ammaanka shirkadda. Singh wuxuu ahaa xiddig weyn xagga duullimaadyada sanado hadda, iyo kaalintiisii ​​hadda Air India waa la daawanayaa oo leh dan weyn.
Nadiifinta amniga iyo hagaajinta qiimaha keydka ee iibka ayaa ah laba arrimood oo muhiim ah oo ay tahay in dowladdu xalliso. Waxyaabaha kale ee welwelka laga qabay ayaa ah su’aasha ah sida loola tacaalayo khasaaraha weyn ee ay Air India urursatay sanadihii la soo dhaafay, iyo sida loola dhaqmi doono hantida kale ee khadka Maharaja, oo ay ku jiraan hantideeda ma guurtada ah iyo ururinta farshaxanka. Maareynta dhulka iyo quudinta hawadu sidoo kale waxay ahaayeen arrimo welwel leh tan iyo markii ay soo ifbaxday hadal -haynta
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, dhowr jeer ayaa la isku dayay in la iibiyo xamuulkii qaranka, laakiin isku daygaas ayaa loo hakiyay sababo kala duwan awgood. Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ayaa ahayd sida looga jawaabayo su'aasha ah yaa wax ka qaban doona khasaaraha weyn - iibsadaha cusub mise dawladda?
Arrimaha shaqaaluhu sidoo kale waxay ahaayeen meel dhib badan, oo la isweydiiyo sida yaa sii hayn doona iibsadaha cusub, yaase la eryi doonaa? Ururada iyo ururadu waxay ahaayeen kuwo hal mar aad u danaynayay inay talo ka dhiibtaan waxayna xitaa ka fekerayeen inay dalbadaan.
Doorka, haddii ay jirto, iibsadayaasha ajnabiga ah ayaa sidoo kale ahaa goob dood, laakiin hadda waxay u muuqataa in shirkadaha waaweyn ee wax soo iibsaday ay la yimaaddeen dalabyo maaliyadeed oo ah ka qaybgalka Tatas iyo Ajay Singh.
September 19, 2021 at 07: 47
Waan ogahay inaysan ahayn sababta oo ah waxaan rabaa inaan kula joogo. Ma sameeyo Mararka qaarkood waxaan dareemayaa inaan u qalmo inaan kula joogo, sida aan u qalmo dhaawaca aad si fudud iigu keento. “Fiiri, haddii aad runtii doonayso inaad ka gudubto waqtigan oo dhan, waxaad u baahan tahay inaad ka cafiso xanuunka ay kuu geysatay, adiga oo aan loo eegin haddii aad tahay.